Agarsiisaa argii LibreOffice xiqqeessa ykn guddisa.
Foormulaa madaallii agarsiisa 25% n dabali. Madaalliin guddisuu kabala haalojiirratti ni agarsiifama. Madaallii baafataa halqara kabala haalojii keessa jiru irra jijjiiru ni dandeessa. Baafatni halqara bakka hojii dirqala guddisuus of keessa qaba.
Ajajni kun foormulaa galmee foddaa keessa jiru ni haaroomsa.
Jijjiraamni foddaa Ajaja keessa ofumaan kan haaromsu yoo Haaromsi Mul'annoo ofumaani kakaasamera ta'e dha.
Agarsiistu Haaromsituu Ofumaani
Ofumaan akka of haaromsuuf ajaja foormulaa fooyya'aa kana filadhu. Yoo filannoo kana hin filattu ta'e, foormulaan kan haaromsu yoo ati mul'anno - haaromsi filaatte fi F9 dhiibde qofadha.
Kabala Haloojiiqarree jala foddaati argmu mul'isa ykn dhoksa.
Baaftootaa fi kamshoota Barreessaa ykn Calc keessaa mul'isa ykn dhoksa. Halata argii guutuu keessaa bahuuf, qabduu Bani/Dhaamsi Argii Guutuu cuqaasi.
Title is: Mul'isi